Strawberry Brown brotting: sida loo kabo cudur fungal ah
Barafka cawska ee Brown waa cudur aan ka soo jeedin cayayaanka, laakiin infakshanka fungal. Waxaa muuqata qaabka mugdi madow on ubax, petioles, shaarib iyo toosan berry. Laakiin ugu nugul weli waa caleemaha cagaaran iyo caleemo. Iyadoo ogaaday calaamadaha ugu horreeya ee cudurkan, korriinka waa in uu soo farageliyaa sida ugu dhaqsiyaha badan si uu u awoodo inuu badbaadiyo berry macaan oo macaan leh.
Abuuritaanka strawberries Eliana: faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada kala duwan
Taageerayaasha miraha waaweyn ee strawberries ayaa hubaal ah in ay jecel yihiin Eliana. Waxaa loo duubay beerta guriga ee Holland. In cimilada qaaradda, nooca noocan oo kale ah ayaa dareema weyn. In article waxaan tixgelin doonaa technology of strawberries sii kordhaya Eliana, bixin sharaxaad kala duwan oo leh sawiro iyo sharaxaad ka mid ah astaamaha technology beeraha ee dalagga this.
Waa maxay strawberries kaynta oo faa'iido leh: sharax, ka kooban iyo isticmaalka berry duurjoogta
Xoolaha duurjoogta ah ee sii kordhaya ee kaymaha waxay leeyihiin dhadhan aad u fiican iyo caraf udgoon marka la barbardhigo dhiggooda beertooda. Maantana waxaan ka hadli doonnaa strawberries kaynta, taas oo ah dukaanka macaamiisha waxtar leh, iyo, intaa kadibna lagu karsado, ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada dhaqanka iyo xitaa qurxinta. Tilmaamaha Daqiiqada dabiiciga ah waa xayawaan dilaacsan oo ka tirsan jadeecada Rosaceae.
Sida loo jaro caleemaha iyo shaaribada strawberries
Dhaqan ahaan noocyada kala duwan ee strawberries inta lagu guda jiro xilli sii kordhaya waxay u oggolaanaysaa shaarib ah - habab dhuuban oo kiciya dhammaan jihooyinka. Haddii caleemahaasi ay dhaawici doonaan strawberries, haddii ay tahay lagama maarmaan iyo goorta la jarayo shaararka, waxaan ka helaynaa faahfaahin. Miyaan u baahanahay inaan ku xoqo caleemaha iyo strawberries shaarbuuni Bidlaha aan lahayn daryeel iyo duurka dhirta strawberry si dhakhso ah iyo qaro weyn u baxda.
Noocyada strawberries sii kordhaya "Clery" markay yihiin xagaaga xagaaga
Maanta waxaad ka heli kartaa tiro badan oo kala duwan oo kala duwan ee strawberries, oo ma fududa in la doorto mid ka mid ah in koraan xaaladaha cimilada aad u baahan tahay. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa noocyada kala duwan ee strawberries "Clery", waxaan ka fekeraynaa si faahfaahsan sharaxaad, faa'iidooyin iyo faa'iido darro, iyo sidoo kale sifooyinka daryeelka iyaga. Noocyada Noocyada "Clery" waxaa lagu gartaa Bisaylkiisa hore, iyo berry waxaa lagu beeray 15 maalmood, taas oo ku haboon kulanno badan.
Sida loo quudiyo strawberries guga: daaweynta dad
Strawberry waa mid ka mid ah delicacies jecel ee xagaaga kulul, waxay u baahan tahay daryeel joogto ah iyo bacriminta. Laakiin ma aha in dhammaan bannaanka u leeyihiin fursad ay ku iibsadaan bacriminta for strawberries, oo aad u baahan tahay in la soo baxo iyada oo gargaar raashin caansan loo cadeeyay. Maqaalkani wuxuu sharxayaa hababka ugu wanaagsan ee dadweynaha ee dalagga wanaagsan ee strawberries.
Strawberry manka: siraha ah ee helitaanka dalagga weyn ee berry waaweyn
Strawberries waxay ka mid yihiin beruudyada caadiga ah. Strawberry macaan ayaa magaceeda ka helay ereyga latin ee "ananassa", taas oo tarjumay macnaheedu yahay "strawberry beerta". Mirahaas waxba kuma laha anagoon. Maqaalka wuxuu diiradda saarayaa beerista strawberry (strawberry) cananaaska, sharaxaadda noocyo leh sawiro.
Sida loo koro strawberries "Honey" ee waddanka: Talooyin iyo khiyaamo
Strawberries waa mid aad u caafimaad qaba, dhadhan fiican leh oo caan ah. Sidaa daraadeed, ninkii beerta ka shaqeeyaa waa inuu ku koraa gurigiisa ama beerta beerta. Si kastaba ha ahaatee, ma fududa in la go'aamiyo doorashada kala duwan. Tixgeli mid ka mid ah noocyada hore ee berry this, si toos ah ugu raaxaysato dareenka ee bannaanka u. Noocyada kala duwan ee strawberries "Honey" - mid ka mid ah noocyada ugu horeeya ee doorashada xulashada American strawberry.
Sida loo diyaariyo strawberries xilliga qaboobaha: cuntada sida loo ilaaliyo berry
Dad badan oo jecel strawberries ayaa seegaya berry jecel xilliga jiilaalka. In maqaalka waxaan kuu sheegi doonaa waxa la sameeyo strawberries si loo badbaadiyo jiilaalka. Strawberries ee xilliga qaboobaha: sida loo doorto berry ah ee kaydinta Maanta ku saabsan shelter ee dukaamada strawberries sanado wareegaya. Waxaad ka heli kartaa strawberries badan oo macaan iyo weyn oo xitaa jiilaalka.
Waxaannu korinnaa qudaarta "Mara de Bois" ee dalka
Strawberry waa mid ka mid ah berry ah in dhammaan bannaanka u jecel yahay. Noocyo kala duwan ayaa kuu oggolaanaya in aad koraan miraha kala duwan ee dhadhanka iyo qaangaadhintooda. In our article waxaan ka wada hadli doonaa strawberry "Mara de Bois", waxaan ku siin doonaa sharaxaad kala duwan oo kala duwan sawir, iyo sidoo kale waxaan wadaagaan jawaab celin ka soo bixiyayaasha. Noocyada kala duwan ee strawberries "Mara de Bois" (oo loo tarjumay "berry kalluunka") - xulashooyin Faransiis ah oo kala duwan, oo loo yaqaanay 1991.
Waxaan koraan taajka beerta
A noocyo kala duwan oo beerta cawska ah "Crown" abuuray by beeraha Holland ayaa soo jiitay dareenka ah ee bannaanka u badan. Aynu si fiican ula socono cawska "Crown", sharaxaada kala duwan, sifooyinka, sawirrada iyo dib u eegista. Noocyo Noocyo Dhalooyin dhexdhexaad ah, oo aan ahayn caleemo iyo u baxda leh weelasha, waxay ku baxdaa dusha sare, ballaadhan.
Mid ka mid ah cadowga ugu xun ee bannaanka u yihiin dirxiyo cabsi - nematodes. Waa duufaan wareegsan oo ku saabsan 1 mm dheer. Waxay ku xidhan tahay astaamaha dhirta, waxay isku duraysaa walax gaar ah oo keena fal-celin kiimikaad, taasoo ka dhalatay naabashooyinka dhirta ay noqdaan cunto wanaagsan oo loogu talagalay dulinka. Sida loo ogaado cayayaan Sababtoo ah xajmiga microscopic, maaha suurtagal in la ogaado nematode leh indhaha qaawan.
Sida loo daryeelo strawberries remontant
"Cusbooneysiinta" oo laga tarjumay Faransiis macnaheedu waa "dib-u-ubaxyada", iyo kuwa jecel cuntooyinka miro-casiga ah muddo dheer ogtahay waxa dhirta ah, sida strawberries remontant, waa miro dhir ah oo karis ah, oo faraxsan leh miro dhan xagaaga iyo xitaa dayrta hore. Sida loo doorto geedo of strawberries remontant Marka iibsato wax beerto, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u muuqaalka geedka: duurka waa in si fiican loo sameeyay; waa in ay haystaan ​​ugu yaraan 3-4 warqadood oo midab cagaaran oo qani ah, iyada oo aan lahayn wax khasaare iyo cillado kale; Nidaamka xididdada oo horumarsan: xididdada geedka waa in ay ahaataa ugu yaraan 6 cm; wadnaha baadiyaha (kelyaha dhexe) waa inay ahaadaan kuwo waaweyn, casaan.
TOP 10 noocyada ugu fiican ee remontantnaya strawberry
Fursada lagu cuno on strawberries cusub ka hor dhaxan ugu horeysay waa riyo ah kuwa jecel this berry dhadhan iyo caafimaad leh. In this article waxaan ka hadli doonaa noocyada ugu caansan ee remontant leh sawir iyo sharaxaad. Albion Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee la xayeysiin karo ee cawska "Albion" wuxuu siinayaa ballaaran (miisaankeedu yahay ilaa 60 g) berry casiir ah oo dhan xilli ciyaareedkan.
Strawberry Jam Cunto
Dad badan, xilliga goosashada waxay ku bilaabmaysaa diyaarinta cawska strawberry, miro yar oo u muuqda mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee xajmiga. Maanta waxaannu u sheegi doonaa sida loo sameeyo macaanka cawska oo qaro weyn, taas oo ah ugu horrayn si buuxda loogu buuxiyo buuxinta, rooti, ​​iyo sidoo kale suugada for canjeelada iyo canjeelada.
Cunto-strawberry xilliga dayrta waa damaanad-qaad ah oo tayo badan iyo tayo sare leh xilliga soo socda. Si aad u gooyso iyo ka saarto caleemo jir ah, si loo dabciyo iyo quudiyo ciidda, si ay u daboosho dhirta xilliga jiilaalka - tani waa daryeelka aasaasiga ah ee strawberries ka dib goosashada. Shaqada dayrta ee dalaggu wuxuu bilaabmaa marxaladda qadhaadh.
Fusarium strawberry dildillaaca: sida looga hortago oo loo daaweeyo
Maanta, noocyo badan oo strawberries ayaa lagu beeray. Qaar ka mid ah waxay u bislaadaan goor hore, waxay ku jiraan sonkor badan waxayna ilaaliyaan muuqaalkooda suuqa, qaarkoodna - qadar badan oo sonkor ah waxay si deg deg ah uga sii darayaan mana u dulqaadanayaan gaadiidka dhamaantood. Qof kastana wuxuu u daweeynayaa cudurro kala duwan: qaar ayaa iska caabiya caleemaha cirridka iyo xayrta, laakiin maaha kuwo aan iska difaaci karin.
Verticillary dildilaaca ee strawberries: sida loo dagaalamo
Dhirta isdabajoogga ah ma aha oo keliya xilliga qallalan. Waxaa sababi kara fangaska si loo yareeyo nidaamka asaasiga ah mana ogolaan ku xoortay geedo, khudaar ama geedo si caadi ah u koraan. Waxaa horay loo ogaaday dhimashada dhamaystiran ee geedka. Maqaar-la'aanta waxaa loo arkaa mid khatar u ah dalagyada.
Haddii aad rabto inaad uruuriso strawberries casiir leh iyo xitaa, iyo xitaa tiro badan, sariirta waa in la nadiifiyaa wakhti go'an. Xaglaha qarxa ee dhirta ayaan awoodin in ay nuugaan qoyaan ka soo qoto dheer, sidaa darteed, marka dhulku dillaaco, waxay ku dhacaan fuuqbax. Laakiin ma ku shubi kartaa duurka. Aan fiirino sida ugu badan ee biyaha qudaarta loo beeray inta lagu guda jiro ubax iyo Bisaylkiisa ee berry iyo haddii ay suurtagal tahay in la isku daro nidaamyadan iyagoo dharka leh.
Strawberry (strawberry) "Alba": sharaxaadda noocyada kala duwan iyo sifooyinka
Kala duwan noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee strawberry "Alba" ayaa muddo dheer sabab u ah muranka ka mid ah bannaanka u khibrad leh. Noocyada noocyada dabiiciga ahi waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido daro. Maqaalkani, waxaan tixgelinaynaa noocyada kala duwan ee daaweynta ugu jecel faahfaahin dheeraad ah. Sharaxaad "Strawberry" Alba "waxaa lagu xannibay laba nooc oo kale oo ka hoosaysa hoggaanka shirkada ugu caansan Italy -" Miro Cusub ".